Ebuputara Firefox Adị PC Nchọpụta maka Ngwaọrụ VR yana ihu ụzọ Ntugharị Ọhụrụ maka Firefox 81 | Site na Linux
Hapụrụ Mozilla na nso nso a mmeghe nke nyocha ohuru nke ihe nchọgharị maka sistemụ eziokwu nke mebere «Firefox Adị PC Preview»Nke bu a ihe nchọgharị na-akwado atụmatụ nzuzo Firefox niile, ma awade interface njirimara ato ato dị iche iche na-enye ohere Chọgharịa saịtị n'ime ụwa mebere ma ọ bụ dị ka akụkụ nke usoro eziokwu dịwanye elu.
N'adịghị ka mbipụta mbụ nke Firefox, a na-eji nsụgharị nke eziokwu ahụ akwado ngwaọrụ gam akporo, Firefox Adị PC na-elekwasị anya na nyiwe eziokwu dị adị na jikọọ na kọmputa nkeonwe.
1 Banyere Firefox Adị PC Preview
1.1 Ntugharị nlele ọhụụ ọhụụ
Banyere Firefox Adị PC Preview
Na mgbakwunye na interface maka njikwa site na okpu agha 3D, nke na-enye gị ohere ịlele peeji nke akụkụ abụọ, ihe nchọgharị ahụ na-enye ndị mmepe weebụ WebXR na WebVR API na ndọtị VR maka WebGL na CSS, nke na-enye ohere ịmepụta ngwa ọrụ akụkụ atọ dị iche iche maka mmekọrịta na oghere dị iche iche na itinye usoro ụzọ igodo 3D ọhụrụ, usoro maka ịbanye ozi na ihu maka chọta ozi.
Ọzọkwa Na-akwado ikiri vidiyo vidiyo nke ogo 360 na okpu agha 3D. A na-achịkwa site na ndị na-ahụ maka VR na ntinye data na ụdị weebụ site na mebere ma ọ bụ ezigbo keyboard.
Firefox Adị PC Preview bụ ihe nchọgharị ọhụụ nke mebere na ntanetị nke na-enye 2D machie igodo yana ngwa nmiri ma na-akwado ahụmịhe ntanetị dabere na isi okwu PC jikọtara ya. Nwere ike ịnweta web web, na-ese n'elu mmiri na gburugburu ebe obibi gị mgbe ị na-eji onye njikwa iji mmekọrịta na ọdịnaya weebụ.
I nwekwara ike ile vidiyo vidiyo nke 360 ​​site na saịtị dịka Vimeo ma ọ bụ KaiXR, yana ọtụtụ ngosipụta nke ahụmahụ miri emi sitere na gburugburu ụwa. Iji Firefox Adị PC Preview, ị nwere ike inyocha 3D ọdịnaya weebụ ejiri WebVR ma ọ bụ WebXR, dịka Mozilla Hubs, Sketchfab, na Hello WebXR. Ma n'ezie, Firefox Adị PC Preview nwere otu nzuzo na nchekwa nke Firefox nkịtị na-akwado na desktọọpụ.
na Firefox Adịkwa PC Preview na-ewu maka nrụnye Site na HTC Viveport katalọgụ (maka ugbu a, naanị maka Windows 10).
Y na - arụ ọrụ okpu agha 3D niile dabara na ikpo okwu Viveport, gụnyere Vive Cosmos, Vive Pro, Valve Index, Oculus Rift, na Oculus Rift S.
Ntugharị nlele ọhụụ ọhụụ
Ozi ọzọ ewepụtara banyere Firefox, fun'ime ime alaka ụlọ ọrụ Nightly nke bụ ntọala maka mmalite nke Firefox 81.
Na ihe nchọgharị a na-anwale alaka Ozi e wepụtara banyere ọhụrụ mmejuputa iwu-nke nchọgharị si ebipụta preview interface.
Ọhụhụ ọhụụ ọhụụ pụtara maka mmeghe na taabụ dị ugbu a na nnọchi nke ọdịnaya dị (ebe ọ bụ na interface nyocha ochie mere ka oghere nke windo ọhụrụ), ya bụ, ọ na-arụ ọrụ site na ntụnyere ya na usoro ndị na - agụ ya.
Na Firefox, mgbe ahọpụtara menu ma họrọ nhọrọ nbipụta, Bipute Preview na-emepe site na windo nchọgharị ugbu a kama iji windo ọhụrụ.
Ebe ọ bụ na njehie ahụ kọrọ 19 afọ gara aga, Firefox ọ kwesịrị imechi windo nchọgharị ma ọ bụrụ na i mechie windo Preview ebi akwụkwọ, nke na-abụghị n'ebumnuche site imewe iji gbochie ọnwụ data.
Iji mee ka ihu njirimara onye na-ebipụta akwụkwọ kwekọrọ na ngwa ndị ọzọ na Windows na iji dozie ntụpọ UI, Mozilla na-akwadebe a interface de onye mbipụta modal lashes maka Firefox ma dị na Firefox 81 Abalị ọ bụla ma nyekwara ya aka na peeji nnwale dịka 'Bipute Preview Redesign'.
Ngwaọrụ maka ịhazigharị ihu akwụkwọ peeji na mbipụta ntọala sitere na ngalaba elu gaa n’aka nri, nke gụnyekwara nhọrọ ndị ọzọ dịka ịchịkwa ntinye nke isi na ibi akwụkwọ dị n’azụ, yana ikike ịhọrọ onye nbipute.
A na-enye ntọala ibipụta print.tab_modal.enabled n'ihe banyere: nhazi iji chịkwaa ntinye nke ọnọdụ ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ewebata Firefox Adị PC Nchọpụta maka Ngwaọrụ VR yana ihuchalụ Mbipụta Ọhụrụ maka Firefox 81
Mwakpo ọhụụ ọhụụ na-emetụta Intel, AMD, IBM na ARM processors